HomeArimaha QoyskaU Gaar Ah Dumarka: 5 Calaamad Oo Kuu Cadaynaysa In Uu Dhamaaday Jacaylkii Uu Kuu Qabay Gacaliyahaagu.
Xidhiidhka farxada ku dhisan ayaa leh cadaymo badan xitaa hadii ay jirto dhibaatooyin kaala dhexeeya gacaliyahaaga waxa sidoo kale guurka farxada ku dhisan leeyhay Astaamo badan oo uu ka mid yahay jacalka idinka dhexeeya adiga iyo gacaliyahaaga.
Laakiin waxa jirta Astaamo ama cadaymo kuu muujinaya in uuna gacaliyahaagu ku jeclaynkuwaas oo aad ku ogaan karto in ay qasabtahay in aad kala tagtaan ama aad raadisaan xal kale oo aad jacaylkiina ku badbaadin kartid.
Hadaba waxa aan halkan kuugu soo bandhigi donaa 5 calaamad oo kuu muujinaysa in uu dhamaaday jacaylkii uu kuu qabay gacaliyahaagu:
1.In Uuna Doonayn in aad caruur kale u Dasho:
Fikirka ubad dhalisata labada qof ee is qaba waa mid iska dabiici ah oo ay isku raacsanyihiin laakiin hadii uu gacaliyahaagu gabi ahaan diido in ay caruur kale idiin dhashaan waxa ay cadayn u tahay in uuna wax jacayl dambe ah kuu qabin.
2.In Uuna Guriga Joogin Wakhti Badan:
Marka uu khilaaf kala dhex galo labada qof ee is qaba ninka ayaa qol kale ka daga gurigiisa isaga oo ku ciqaabaya xaaskiisa laakiin hadii uu xaaskaagu guriga joogi waayo wakhtiga uu shaqada fasax kaga jiro waliba habeenkiina wakhti dambe yimaado waxa ay cadayn weyn u tahay in ay gabi ahaan dhamaatay dareenkii jacayl ee uu kuu qabay.
3.In Uu Kaligiis Galo Safarada ama Fasaxyada:
Marka uuna Ninku farxad ku haysan gurigiisa waxa uu qaataa safaro badan iyo waliba fasaxyo badan isaga oo aan horay u wadanayn xaaskiisa arintaas oo cadayn u ah in uuna gacaliyahaagu gabi ahaan ku jeclayn.
4.In Aanu Wax Dareen Ah Ku Siin:
Hadii aad isku daydo in aad isku sii qurxiso gacaliyahaaga inta uu shaqada ku maqan yahay iskuna daydo in aad ku farxad galiso quruxdaada laakiin uuna xitaa ku soo eegin waxa ay la macno tahay in uuna wax dareen ah gabi ahaan kuu hayn.
Ninku marka uu jacalyahay gabadhiisa waxa uu si fiican uga buuxsadaa indhaha quruxda xaaskiisa meel walba oo ay ishiisu gaadho.